Ndị Ikuku Ikuku Na-arụ Ọrụ? Nke a bụ Ihe Knowmara - PureWow - Ulo
Ndị Ikuku Ikuku Na-arụ Ọrụ? Ee-Ugbu a Ka Anyị Kpochapụ Ikuku na confọdụ Nghahie
Ma eleghị anya, ị nwere ihe nfụkasị ahụ. Ma eleghị anya, ị enwetala otu ọtụtụ ọkwa ịkwanye banyere ikuku ikuku dị n'ógbè gị. Ikekwe ị nụrụ ya nwere ike inye aka gbochie mgbasa nke COVID-19. N'agbanyeghị ihe kpatara gị, ị na-atụle inweta ihe ikuku ọcha , ma n’ime ime ala, ị gaghị enwe ike ịjụ ma ị na-eche, sị: Ndị na-ekpocha ikuku na-arụ ọrụ? Ha na-ekwe nkwa iza ájá, ifuru, anwụrụ ọkụ, na nje — ma ha na-enyefe ihe na nke a, ka ọ bụ na ọ bụ naanị ihe efu karịa ha? Anyị nyochara nyocha ma tụgharịa Dr. Tania Elliott , ihe allergist na mba ọnụ na-ekwuru maka American College of Allergy, Asthma na Immunology .
RELATED: Wzọ 6 iji melite ogo ikuku gị (na 1 Nke ahụ bụ oge efu)
Foto Jomkwan / Getty
Nke mbu, Gini ka ndi nchacha ikuku * N'ezie * nyocha?
Ndị na-ehicha ikuku (nke a makwaara dị ka ndị na-edozi ikuku ma ọ bụ ndị na-ehicha ikuku) na-a particlesụ ihe si na ikuku, dị ka pollen, fungal spores, dust, pet dander, soot, bacteria na allergens .
Ọ D, MMA, Ya mere, Olee Otú Ha Si Eme Nke Ahụ?
N'ụzọ bụ isi, igwe ndị a na-eji ihe nzacha-ma ọ bụ nchikota nzacha na ọkụ UV-iji wepụ ihe ndị na-adịghị mma na ihe na-emetọ ikuku. Ezubere ha iji melite ogo ikuku n'otu ime ụlọ, yana Environmental Protection Agency (EPA) na-ekwu, mgbe ha dị dị irè na ihicha ikuku, ha enweghị ike iwepu ha niile Ihe mmetọ.
Ndị na-ehicha ikuku na-eme nke a n'otu n'ime ụzọ abụọ: site na nzacha ikuku ikuku ma ọ bụ ndị na-ehicha ikuku. Ihe mbu bu udiri ihe dika mitt catcher, ya na ihe ndi ahu gha abanye na nzacha. Ndị nke abụọ ahụ — ndị na-ehicha ikuku nke ikuku, nke gụnyere ihe ndị na-eme ka electrostatic na ionizers — na-eji ọkụ eletrik akwụ ụgwọ ma na-arapara na efere ndị a na-akwụ ụgwọ na igwe. Fọdụ na-ejidị ọmarịcha ihe ọkụkụ na-egbukpọ ụmụ irighiri ihe ndị dị ikuku. Ugbu a, ị naghị anụ Bill Nye niile maka ịmara nke ahụ?
Ndị Na-ehicha Ikuku * * * Na-enyere Ndị Mmadụ Aka Nwee Ahụhụ?
Ee — ha pụtakwara nnọọ ndị na-arịa ọrịa pollen ma ọ bụ ọrịa ndị metụtara anụ ụlọ. Ahụhụ anụ ụlọ na-anọ na-akwụsịtụ n'ikuku ruo ọtụtụ ọnwa n'otu oge, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anụ ụlọ adịghịzi n'ụlọ, Dr. Elliott na-akọwa. Ihe nhicha ikuku nke nwere ike ijide ihe dị iche iche bụ ezigbo nzọ gị. Ọ na-enye aka maka ndị nwere ọrịa pollen, ebe ọ bụ na anyị ga-esoro uwe anyị, akpụkpọ ụkwụ na ntutu anyị na-abanye pollen n'ime ụlọ.
Ezigbo ihe nkiri ezinụlọ 2019
Site na nkpuru nkpuru, ọ pụtara ájá, pollen, ebu na ihe ndị yiri ya. Ngwongwo ndị a na-ewere dị ka ihe dị ala karịa ihe dị ka micron 10 na dayameta (ihe ndị na-egbu egbu, dị ka soot, smog na nje, erughị 2.5). Iji jiri ya tụnyere, ntutu isi mmadụ dị ihe dị ka micron 50 ruo 70 na dayameta. Ya mere, anyị na-ekwu obere - n'ezie, n'ezie obere.
Ọtụtụ ihe nzacha HEPA na ihe nhicha ikuku nwere ike iwepu ahụ Micron 0,3 na dayameta ; lelee ndị ahụ anya ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nlereanya nke nwere ike inyere aka wepụ nje na ikuku. (Ndị EPA na-atụ aro ụdị nke na-ewepụ ihe na-erughị 1 micron na dayameta, yabụ anyị chịkọtara mmadụ anọ a tụlere na ha niile na-agbaso ụkpụrụ ndị dị n'okpuru.)
kedu ihe omume iji belata abụba afọ
LEVOIT Ikpocha ikuku
Dyson Dị Ọcha Na-ekpo ọkụ na Ọcha Na-ekpo Ọcha na Fan
LG PuriCare Obere
Coway Mmarị Ọmarịcha HEPA Ikpocha ikuku
Cool, Ma Gịnị banyere Mjá Mite Allergies?
Ozi ọjọọ: Ndị na-ehicha ikuku agaghị arụ ọrụ maka ndị nwere nsogbu ahụ, n'ihi na ọka uzuzu buru ibu buru oke ibu ka ọ ghara ịnọdụ ala, Dr. Elliott na-ekwu. Maka ụdị ahụ nfụkasị gị, nzọ gị kachasị mma bụ agụụ, uzuzu ma na-asa ihe ndina gị mgbe niile , ma tinye ego na mkpuchi bed-allergen.
Ihe nchacha ikuku ga - echebe m megide COVID-19 na Ọrịa Ndị ọzọ?
Na EPA ọtụtụ ndị dọkịta kwetakwara na ndị na-ehicha ikuku na-enye aka — ọkachasị ma ọ bụrụ na mmetọ dị n’èzí dị elu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị oke oyi ịsaghe windo gị ma webata ikuku ọhụrụ—
Ihe ụmụ irighiri nje virus, dị ka SarsCoV2 na flu, ndị a nwere ike ịnọ na-akwụsịtụ na ikuku ruo ọtụtụ awa, yabụ ihe nzacha ikuku enweghị ike imerụ ahụ, mana cheta ụmụ irighiri mmiri ahụ nwekwara ike ịdaba na mbara ala ma nọdụ ebe ahụ, ka Dr. Elliott na-akọwa. Onye na-ehicha ikuku ekwesighi idochi mkpuchi nkpuchi, ịsa aka, ikewapụ onwe ya, ịghara ịkekọrịta ngwaahịa nkeonwe na usoro ịdị ọcha.
Dị ka CDC si kwuo, tụlee akụkụ ventilashị nke a atụmatụ aghụghọ iji gbochie mgbasa nke coronavirus.
Kedu ihe nha nke ziri ezi ikuku maka ụlọ m?
Jide n'aka na ị ga-enweta otu nke dabara nha ụlọ ahụ site na ịlele elikwụ Nnyefe Ọcha (CADR), ka Dr. Elliott na-ekwu. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ ị ga-ahụ na ọtụtụ ikuku purifiers ’nkwakọ ngwaahịa-ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụla ụlọ ọrụ na-eji aka ha onwe ha n'okpuru ha igwe na Association nke Ndị Na-emepụta Ngwaọrụ Homelọ iji nwalee ogo CADR ya. Enwere otu akara CADR maka pollen, otu maka ájá na otu maka anwụrụ ọkụ, na mkpakọrịta ahụ na-atụ aro ka ị họrọ onye na-ehicha ihe na akara CADR nke dịkarịa ala ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke mpaghara ụlọ ahụ. Huh?
Nke ahụ nwere ike ịdị ka ihe mgbagwoju anya, mana ọ bụ mgbakọ na mwepụ bụ isi: Ọ bụrụ na ị na-ekpocha ikuku na 10-ụkwụ site na 10-ụkwụ ụlọ, nke ahụ bụ 100 square ụkwụ, yabụ na ịchọrọ akara CADR nke opekata mpe 67 na nke ọ bụla n'ime atọ atọ.
Kedu ebe kachasị mma iji tinye ihe nhicha ikuku?
Ka anyị dịrị adị: Ndị na-ehicha ikuku abụghị ihe mgbakwunye mara mma na ịchọ mma gị, yabụ na-anwa ịmịnye ha n'azụ osisi ma ọ bụ nnukwu arịa. Emela. Chọrọ idebe ha n'ime ụlọ ebe ị na-anọkarị oge-ọkacha mma, ọnụ ụlọ ebe ndị kachasị nwee nsogbu n'ime ezinụlọ gị (ụmụ ọhụrụ, ndị okenye na ndị nwere ụkwara ume ọkụ) na-anọkarị oge-yana n'ọnọdụ nke na ikuku dị ọcha dị -adị nso otú ha ga-enwe ike iku ume ya, dị ka EPA . Karịa nke ahụ, ọ dịkwa mma ịkpọtụrụ ntuziaka ndị nrụpụta maka ntinye.
Ogologo oge ole ka ihe nhicha ikuku na-ewe iji kpochapụ ikuku n'ime ụlọ?
Nye ya opekempe Nkeji 30 ruo otu awa , ma ụfọdụ ụlọ ọrụ na-atụ aro ka ha na-agba ya ọsọ ụbọchị nile, kwa ụbọchị, ebe ọ bụ na a na-enyocha ihe ndị na-emetọ ihe arụ n’ime ụlọ ma na-efegharị na windo ndị e mepere emepe. (N'ezie, ọ bara uru ịkọba mmetụta na ịme nke a nwere ike ịbụ na ụgwọ ọkụ eletrik gị.)
There Nwere ofdị Ihe Ntụcha Ikuku M Kwesịrị Izere?
Eeh. Zere ebe ikuku ikuku na-eme ka ikuku dị ọcha. Dị ka aha ahụ na-egosi, ha na-ewepụta ozone, nke nwere ike ibute nsogbu ahụike n'ọtụtụ ebe, yana EPA akụkọ ozone anaghị ewepu ihe na-emetọ ihe. Na ederede ahụ, ọ bara uru ịkọ na ọ nweghị ụlọ ọrụ gọọmentị etiti kwadoro ka ha jiri ya n'ụlọ ( ọ bụ ezie na ụfọdụ ụdị nwere ike ịsị na ). Ọ kaara gị mma na ị ga-eji ihe nhicha ikuku nke na-eji eriri ikuku ikuku ikuku ma ọ bụ nhicha ikuku eletrik.
RELATED: LG Puricare Mini Dị Ka iPhone nke Ikpocha Ikuku
omume iji belata abụba gburugburu n'úkwù
ụdị ntutu dị mfe maka ntutu ntutu
omume na-esure tummy abụba
Hollywood kacha mma akụkọ ịhụnanya
foto achicha achicha
ndụmọdụ ụlọ maka ntutu isi